I-BS Apartment Flatiron
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Boban
I-BS Apartment itholakala esitezi sesi-7 se-elite yokuhlala complex i-Adora Flatiron, enombono we-panoramic wedolobha kanye nentaba yaseVodno. Ifulethi liqhele ngamamitha angama-900 kuphela ukusuka esigcawini esikhulu, zonke izindawo ezikhangayo, izindawo zokudlela, izindawo zokudlela, amakilabhu asebusuku, izikhumbuzo ezifana nesithombe sika-Alexander the Great, iSango Lokunqoba, i-Stone Bridge, i-Mother Teresa House, njll. kanye ne-1 nje kuphela km ibanga ukusuka kuSitimela esimaphakathi neSiteshi Sebhasi Skopje. Ebhilidini unesevisi ye-concierge engama-24.
I-BS Apartment iyifulethi lesimanjemanje, linesitayela futhi linefenisha ngokugcwele engu-31m2 enovulandi omncane futhi othokomele, kanye ne-WiFi yamahhala. Ifulethi lingakwazi ukuhlalisa abantu abangafika kwabangu-3 ngokunethezeka.
Ikhishi lihlome ngokuphelele. Futhi unomenzi wekhofi onezinhlobo ezimbalwa zamahhala zamakhofi afana ne-espresso, i-macchiato, i-cappuccino, kanye nezinhlobo ezimbalwa zetiye.
I-Open Plan Living Room ihlome ngokuphelele nge-43" UHD Smart TV ene-Cable TV canal's, inverter air conditioner, umbhede owodwa ophindwe kabili (160cm x 200cm) kanye nosofa owodwa ongashintshwa kalula ube umbhede owodwa.
Igumbi lokugezela linendlu yokugeza enezinto ezimbalwa ezibalulekile zokugeza (insipho, ishampoo, njll.), amathawula, nokomisa izinwele.
5.0(112 okushiwo abanye)
Indawo ephephe kakhulu futhi isakhiwo sinokuvikeleka nokusebenza kwamahora angama-24.
UBoban Ungumbungazi ovelele